Drupal: Izifundo kunye nolwazi malunga ne-CMS okanye iNkqubo-sikhokelo -Ikaro
yokuqalisa >> Webmaster >> Drupal
Siza kubona indlela yokusebenzisa iDrupal kakuhle kwiinguqu zayo ezahlukeneyo iDrupal 7, 8 kunye neDrupal 9 eyona yakutshanje.
IDrupal ayisiyo i-CMS elula ukuqala ngayo, nangona inokhetho oluninzi kwaye ibe lukhetho lweeprojekthi ezinkulu.
Ndihlala ndiwathanda amandla nokuguquguquka kwawo, kwaye ndiyaqhubeka nokuphanda ngento esinokuyenza ngesakhelo. Mva nje ndinomdla ngakumbi kwindlela ezilunge ngayo kwiiprojekthi ze-SEO.
IDrupal yiCMS yokwakha iiwebhusayithi ezinamandla. Njengazo ezinye izikhokelo zeCMS, iDrupal ine-modular interface evumela abaphuhlisi ukuba benze ngokwezifiso kwaye bandise inkqubo yeCMS.
Isixhobo esikhulu solawulo lokuqukethwe, isikhokelo esinamandla sezicelo zewebhu, kunye neqonga elikhulu lokushicilela eluntwini.
Nge-Drupal sinokwakha nantoni na esiyicingayo.
Indawo yakho kunye noluntu Drupal.org ukuba nguDrupal uphawu lwentengiso olubhalisiweyo nguDries Buytaert